Local firms seek to partner UK companies - Business Daily News Zimbabwe
ZimTrade, the national trade development and promotion organisation, recently completed an outward seller mission to the UK, which was aimed at expanding trade between the two countries and complementing Zimbabwe's re-engagement efforts.
"As a result of the mission, participating companies are in the process of negotiating distributor arrangements with UK companies while some companies have identified business partners who will provide machinery for value-adding their products to meet requirements of their target market," ZimTrade said, adding that there is scope to increase Zimbabwe's exports to the UK.
"There is, therefore, need to support the export of value-added goods and services that have great potential in the UK market," ZimTrade said.
As part of activities to re-ignite UK's appetite for Zimbabwean products, trade and investment seminars as well as business-to-business meetings were held in London and Birmingham during the mission.
"The growing interest in Zimbabwean products is expected to unlock export opportunities for value-added products in the UK and the rest of Europe. Zimbabwean products are best known for their quality and local products such as Mazoe and Tanganda Tea have made a mark in the UK market," it said.
The mission provided a platform for Zimbabwean companies to assess their readiness to do business with Britain ahead of "Brexit", which is expected to open the UK market to non-European Union countries.
"Previously, most imports consumed in Britain were coming from the EU and a successful Brexit will open new trade and investment opportunities for Zimbabwe," ZimTrade said.